Madaxweyne Xasan oo xalay muujiyey inuu qarka u saaran yahay in dib loo doorto - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Xasan oo xalay muujiyey inuu qarka u saaran yahay in dib...
Madaxweyne Xasan oo xalay muujiyey inuu qarka u saaran yahay in dib loo doorto
Muqdisho (Caasimada Online) – Xalay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay munaasabad uu qorshe siyaasadeedkiisa kusoo bandhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale u taagan in xilkaas loo doorto.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu xalay soo bandhigay sababta ay tahay in mar kale dib loogu doorto hoggaanka dalka, isaga oo ujeedkiisu ugu weyn u yahay “Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah.”
Inkasta oo cidda madaxweyne noqon doonta aan la garaneyn, haddana marka la eego xildhibaanada iyo qeybaha kala duwan ee ka qeyb-galay munaasabaddii xalay oo lagu daray qorshe siyaasadeedka uu soo bandhigay, Xasan Sheekh wuxuu u muuqdaa musharaxa ugu rajada wanaagsan oo dhinacyo badan ay ku wada qanci karaan.
Musharax kasta wuxuu leeyahay meelo uu ka liito iyo meelo uu ku xooggan yahay, waxaana Xasan Sheekh halka uu ku xooggan yahay lagu sheegay inuu fahamsan yahay nidaamka dowladnimo, islamarkaana yahay hoggaamiyaha hadda isku keeni kara umadda Soomaaliyeed, kadib shano sano oo ay caadifad, qabyaalad iyo kooxeysi kala geeyeen.
Waxaa xalay munaasabadda Xasan Sheekh joogay xildhibaano aad u badan, ayada oo indho-indheyn ay saameysay Caasimada Online ay ku ogaatay in kulankaas uu ahaa kii ay ka qeyb-galeen xildhibaanadii ugu badnaa, marka loo eego kulamada ay qabteen musharaxiinta kale.
“Xasan Sheekh waa hoggaamiyaha kaliya ee isku keeni kara iskuna hayn kara umadda Soomaaliyeed,” ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada ka qeyb-galay kulanka.
Dhinaca kale, waxaa hadda soo baxaya warar sheegaya in madaxweynihii hore uu soo jiidanayo inta badan taageerada madaxweyne goboleedyada dalka, si gaar ahna Axmed Madoobe, iyo Lafta-gareen ooh adda la sheegay inuu aad uga fakarayo inuu taageero Xasan Sheekh.
Warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in Axmed Qoor Qoor uu taageerayo Xasan Sheekh, balse aanu si rasmi ah u shaacin si aanu u xumeyn xiriirkiisa Villa Somalia, halka Saciid Deni uu taageeri doono Xasan Sheekh haddii u uku haro wareegga koowaad.
Madax goboleedyada ayaa la rumeysan yahay inay Xasan Sheekh u arkaan madaxweynaha kaliya ee xukunkooda uu ka badbaadi karo haddii uu guuleysto, taasi oo dhankiisa usoo jiiday.
“Haddii madaxweyne kasta oo Villa Somalia yimaado uu beddelo madax goboleed kasta oo aan ku aragti aheyn, goorma ayey dhismi doonaan maamul goboleedyada,” ayuu yiri Xasan Sheekh mar uu dhowaan la shiray xubno aad ugu dhow, farriintaas oo gaartay madaxweyne goboleedyada.
Xasan Sheekh wuxuu u muuqda inuu koray waddadii dib u doorashada, balse su’aasha xildhibaanada hortaalla ayaa ah: ma waxay codkooda wax kula darsan doonaan madaxweyne la dooran doono, mise meel cidlo ah ayey ku khasaarin doonaan?
Hoos ka daawo khudbaddii cajiibka aheyd ee uu Xasan Sheekh jeediyey xalay.